I-Maat's Scheuer-indlu yasefama enomtsalane
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAngelika
Indlu yasefama ebuyiselwe ngothando enamagumbi okulala amahlanu, amagumbi okuhlambela amabini, i-sauna, amagumbi amabini okuhlala, ikhitshi, ishedi kunye nesitali esandisiweyo. Ilungele iintsapho ezi-2 kunye nabantwana okanye iqela labahlobo kwiholide emfutshane.
Onke amagumbi afakwe ngothando ngefenitshala endala, imifanekiso kunye neenkcukacha ezininzi ezisuka kwindawo yasemaphandleni. Ubomi obunyulu belizwe!
Iindwendwe zichitha iingokuhlwa ezipholileyo kunye kwi-rustic barn, ekhitshini lokutyisa okanye kwiseyile yeetapile.
"I-Maat's Scheuer eneneni ibangelwa yithuba. Sasifuna i-barn " Scheuer "njengendawo yokugcina itrektara kunye noomatshini. Indlu yasefama ye-barn yayiluthando ekuqaleni kokubona. Ngomdla omkhulu kunye nobuchule bobugcisa, uMatthias " Maat "iye kule iguqulelwa yokugqibela ibe likhaya iholide iminyaka emithathu wayenza gem ngokwenene swii kwilali zokulima" Hamm ".
Xa wayefakela amagumbi, waphumeza usukelo lokukrwelela umtsalane wasemaphandleni ngempahla yokwenene nefanitshala.
Umphumo uba yindawo apho iintsapho ezinabantwana okanye kwaneqela labahlobo elinabantu abafikelela kwi-10 linokuphumla kunye kwiSaar.
Igcinwe kumbindi wepeninsula eSaar, yimizuzu nje embalwa ukuya eSaarburg, apho kufumaneka khona uninzi lwamathuba okuthenga kunye nokuzonwabisa.
Ukusuka e-Maat's Scheuer ungonwabela umbono ongaphazamisekiyo wezidiliya zeSerriger kwaye ubukele ii-hang-gliders ezisuka kwelinye ithambeka, "umbono omhle" kunye nomhlaba ongama-200 m ukusuka kwikhaya leholide.
"I-Hamm" sisithili esincinci sikamasipala waseTaben-Rodt kwi-Saarburger Land, enezindlu ezili-18 kuphela, iimitha ezimbalwa kuphela ukusuka eSaar. Nandipha umbono weediliya zeSerriger, thatha uhambo lwebhayisekile ecaleni kweSaar okanye uhambe kwindawo. Isixeko sothando saseSaarburg esineevenkile zaso sinokufikelelwa ngemizuzu embalwa ngemoto.
I-Mettlach, indawo yeekeramics eSaarschleife, inokufikelelwa ngemizuzu eli-10 ngemoto.
Gastgeberin aus Leidenschaft seit 2001
Umamkeli akasoloko ekwisiza, efumaneka ngefowuni
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Taben-Rodt